Weerar Qaatay Muddo 16 Saacadood Ah Ayaa Kusoo Geba gaboobay Magaalada Muqdisho (Warbixin). – Calamada.com
Weerar Qaatay Muddo 16 Saacadood Ah Ayaa Kusoo Geba gaboobay Magaalada Muqdisho (Warbixin).
calamada June 3, 2016 3 min read
Iyadoo qeyb ka ah silsiladaha Camaliyaadka ah ee lagu ugaarsanayo madaxyo weynta murtadiinta, lagu beegsanayo xarumaha ay ku dhuumaaleystaan ayaa gelinkii dambe ee maalintii shaley waxaa koox yar oo ka tirsan Guutada Istish-haadiyiinta ay camaliyad Inqimaasi ah ku qaadeen Hotelka Ambassador ee magaalada Muqdisho kaas oo ka mid ah dhismayaasha hooy u ah madaxda murtadiinta, Saraakiisha Jawaasiista iyo diblumaasiyiinta reergalbeedka.
Weerarkan oo qaatay muddo ka badan 16 saacadood oo xiriir ah ayaa soo bilowday 11-kii iyo qadar sodon daqiiqo ah oo galabnimo ah, Isagoona soo gaaray ilaa barqanimadii maanta sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogeyaal iyo saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta.
Ugu yaraan 30 ruux oo ay ku jiraan Xildhibaano iyo Saraakiil ka tirsan murtadiinta ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay weerarka, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 60 kale oo isugu jira Maleeshiyaad, Saraakiil sirdoon iyo masâ€™uuliyiin ka tirsan murtadiinta.
Qasaaraha ugu culus ayaa ka dhashay Camaliyadii istish-haadiga ee lagu daahfuray weerarka, taas oo burburisey inta badan dhismaha Hotelka, ayna ku halaagsameen dad aad u badan.
Qaraxa ka dib, Ciidamada Mujaahidiinta ayaa xoog ku galay Hotelka, Iyagoona sii dhameystiray dadkii ku dhaawacmay qaraxa, Waxaana intaas ka dib ay bilaabeen toogasho ay khaarijinayaan gaaladii ku jirtay qolalka Hotelka.
Halyeey ka mid ahaa geesiyadii Islaamka ee fuliyey Camaliyadaas oo aan la xiriirnay daqiiqado un ka dib markii uu weerarku bilowday ayaa Idaacada Islaamiga Andalus uga warbixiyey sida ay wax kaga dhaceen Hotelka iyo Qasaaraha ka dhashay Qaraxa iyo weerarkii ay ku iqtixaameen dhismaha.
Walaalkan ayaa sheegay in qaraxa uu burburiyey inta badan dhismaha Hotelka, ka dibna walaalaha Inqimaasiga ay xoog ku galeen dhismaha iyagoo sii dhameystiray dadkii ku dhaawacmay qaraxa.
Maleeshiyaadka murtadiinta ee taagta daran oo diif iyo darxumo ka muuqatay ayaa soo dhoobtay afaafka hore ee Hotelka iyagoo wata gaadiid oo aad u fara badan kuwaas oo dhowrjeer isku dayey in ay galaan dhismaha Hotelka lkn ciidamada mujaahidiinta ayaa si adag oo geesinimo leh isaga caabiyey.
Ugu yaraan saddex mar ayey murtadiintu ku soo jabeen weeraro ay ku qaadeen Hotelka, Iyagoona ugu dambeyntii ku marmarsiyooday in mugdiga jira uu ka hor istaagayo in ay galaan Hotelka Maadama mujaahidiintu ay soo raacayeen Tooshaska ay wateen ay tooganayeen meel waliba oo ay iftiin ka arkaan.
Meydad aad u fara badan oo isugu jira Maleeshiyaad, Saraakiil noocyo kala duwan leh iyo Xildhibaano ayaa daadsanaa gudaha Hotelka sida uu noo sheegay walaal kale oo aan la hadalnay intii uu howgalku socday, Iyadoona dhanka kale tobaneeyo masâ€™uuliyiin ah ay ku goâ€™doonsanaayeen gudaha Hotelka.
Laba Xildhibaan oo lagu kala magacaabo Dr Maxamuud Guure iyo Cabdullaahi Jaamac ayaa ka mid ahaa masâ€™uuliyiinta kooxda ridada looga dilay weerarkaas, Iyadoo sidoo kalena si dirqi ah lagu soo bad-baadiyey kuwo kale oo qabay dhaawacyo kala duwan.
Ilo Wareedyo ayaa noo xaqiijiyey in labadaan Xildhibaan madaxa laga toogtay xilli ay ku dhuumaaleysanayeen qolalka Hotelka, islamarkaana ay ka mid ahaayeen tobaneeyo ruux oo walaalihii Inqimaasiyiinta ay ku toogteen qolalka Hotelka intii uu howlgalku socday.
Waxaa suuragal ah in ay jiraan masâ€™uuliyiin kale oo ka tirsan murtadiinta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgalka balse dib ayuu ka soo bixi doonaa Qasaaraha kama dambeysta ah.
Weerarkan mudada 16-ka saacadood qaatay ee shaley gilgilay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu yimid xilli mudooyinkii la soo dhaafay kooxda ridada ay ku faaneysay in ay wiiqday awooda mujaahidiinta, islamarkaana aysan geesiyada Islaamka awoodin in ay beegsadaan xarumahooda Muhiimka ah balse Alle ayaa fallaarta kaga keenay meel aysan filaynin, waxayna Arkeen Junuudda Alle oo ku dul takbiirsaneysa Baqtiga madaxdooda iyo saqafka kore ee dhismayaashii ay u maleynayeen in naftooda ay ku bad-baadi karto.
Weerarkan ayaa diraya fariimo adag oo ay ugu h tahay in aysan jirin awood hor istaagi karta Quwadda Iimaaniga si kasta oo uu baadhilku isku soo qalabeeyo, una tayeeyo dagaalka uu kula jiro Islaamka iyo Muslimiinta.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 27-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 27-08-1437 Hijri.